के तपाइलाई थाहा छ , शाहरुखका यी फिल्म ?
प्रकाशित : बुधबार, कार्तिक १४, २०७५२२:२५
बलिउड । बलिउडका रोमान्स किङ शाहरुख खान आउने नोभेम्बर २ देखि ५३ औ वर्षमा प्रवेश गर्दैछन् । उनले बलिउडमा लगभग २५ वर्ष काम गरिसकेका छन् । यसपटक उनि अभिनित फिल्म ‘जिरो’ को ट्रेलरलाई उनको जन्मोत्सवमा सार्वजनिक गरिदैछ । फिल्ममा उनि होचो कदका व्यक्तिको रुपमा देखिएका छन् भने उनलाई कट्रिना कैफ र अनुष्का शर्माले साथ् दिएकी छिन ।
फिल्ममा सलमान खानको पनि केमियो रहेको छ । फिल्मको ट्रेलरलाई बलिउडका सिनियर जर्नालिस्टले हेरिसकेका छन् भने रिभ्यु समेत राम्रो मिलिरहेको छ । आनन्द एल रायको निर्देशनमा तयार भएको फिल्म आउदो डिसेम्बरको तेस्रो साता रिलिज हुदैछ । तर शाहरुखको केहि फिल्म यस्ता पनि थिए , जुन शुटिङ हुदा हुदै रोकिएनन मात्र त्यसको चर्चा समेत मिडियामा भएन । आउनुस , केहि फिल्मको चर्चा गरौ ।
सन् १९९१ मा शाहरुखले अहमक नामको फिल्म साइन गरेर शुटिङ थालेका थिए । जसलाई मणि कौलले निर्देशन गरिरहेका थिए । यसमा अयूब खान र मीता वशिष्ठ पनि मुख्य भूमिकामा थिए । यो फिल्म तयार पनि भयो तर सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएको छैन । तर यसलाई सन् २०१५ मा आयोजित एक फिल्म फेस्टिभलमा भने शो गरिएको थियो ।
सन् १९९५ मा उनले शिखर नामक फिल्मको छायाँकन थालेका थिए । यसलाई फेमस निर्देशक शुभाष घईले निर्देशन गरिरहेका थिए । भारतीय मिडियामा आएको खबरलाई हेर्ने हो भने यसको छायाँकन सुरु पनि गरिएको थियो , जसमा शाहरुखको को-स्टार माधुरी थिइन् । तर आपसी समझदारी नहुदा सुभाषले फिल्मको छायाँकन नै रोकेर , नयाँ कथामा फिल्म निर्माण गरे ।
शाहरुखले सन् १९९६ मा फिल्म ‘किसिसे दिल लगाके देखो’ साइन गरे । लभ स्टोरी फिल्मले दर्शक मन जिती रहेको समयमा यसको नामले नै आकर्षण गर्नु स्वाभाविक नै थियो । यसमा उनिसँगै आयशा जुल्का र मधु पनि लिड रोलमा थिए । तर फिल्मको शुटिङ त सुरु भयो , पुरा हुन् सकेन । केहि कारणवस रोकिएको शुटिङ सुरु नभएपछी यो यतिकै भयो । अन्तत फिल्म नै पूर्ण भएन ।
शाहरुखले सन् २००१ मा फिल्म रश्क साइन गरे । फिल्ममा उनिसँगै बिग बि अमिताभ बच्चन र जुही चावला पनि थिए । फिल्मको छायाँकन पुरा पनि भयो तर फिल्म भने रिलिज हुन् सकेन । फिल्मलाई केहि वितरकले रिलिज गर्ने कोसिस नगरेका पनि होइनन् तर त्यतिबेलाको उनको स्टारडमले काम गरेन र घाटा खाएर वितरकले रिलिज गर्ने आट गरेनन् ।
पछिल्लो समय बलिउडबाट हलिउडमा गएर काम गर्ने धेरैछन् । इरफान खान , दीपिका पादुकोण , प्रियंका चोपडा लगायतले हलिउड फिल्ममा काम गरिसकेका छन् भने अनिल कपूर पनि ‘मिसन इम्पोसिबल’सिरिजमा देखिएका थिए । तर त्यस अगाडी नै शाहरुखले हलिउडमा ट्राइ गरेका थिए । उनले गोप्य रुपमै सन् २०११ मा हलिउड फिल्म एक्सट्रीम सिटी छायाँकन गरिरहेका थिए ।
उनि फिल्ममा मुख्य भूमिकामा त थिएनन् तर महत्वपूर्ण रोलमा थिए । उनि फ्यानलाई फिल्मको टिजर सार्वजनिक हुदा सरप्राइज दिन चाहन्थे । मार्टिन स्कोर्सेसेको निर्देशनमा तयार भईरहेको फिल्ममा लियोनार्डो डिकार्पियो पनि थिए । फिल्मको छायाँकन लगभग ३० प्रतिशत भन्दा बढी भईसकेको थियो तर फिल्म निर्माण कम्पनि केहि समस्यामा परेपछि शुटिङ रोकियो । त्यो शुटिङ पुरा हुन् सकेन र शाहरुखलाई हलिउड फिल्ममा हेर्ने फ्यानको सपना अधुरै रह्यो ।
(एजेन्सी सहयोगमा )
दाहाल बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त
करिश्मा भन्छिन् ‘सरकारी कलेजमै पढ्छु , प्राइभेटमा पढ्दिन’
‘दि ब्रेकअप’ ट्रेलर सार्वजनिक (भिडियो)
अस्कर : सर्ट लिस्ट आउट, बाहिरियो नेपाल
नयाँ फिल्ममा सलमानको डबल रोल ?
एक्लै आइन पुजा